मानवजातिलाई जीवन-अस्तित्वको स्थिर वातावरण प्रदान गर्नको लागि परमेश्‍वरले यावत् थोकहरूबीचको सम्बन्धहरूलाई सन्तुलन गर्नुहुन्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मानवजातिलाई जीवन-अस्तित्वको स्थिर वातावरण प्रदान गर्नको लागि परमेश्‍वरले यावत् थोकहरूबीचको सम्बन्धहरूलाई सन्तुलन गर्नुहुन्छ
परमेश्‍वरले यावत् थोकमाझ उहाँका कार्यहरू प्रकट गर्नुहुन्छ र यावत् थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ र यावत् थोकको नियम-व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हामीले भर्खरै मात्र परमेश्‍वरले कसरी यावत् थोकको नियम-व्यवस्था नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र साथै उहाँले यी नियम-व्यवस्थाअन्तर्गत सम्पूर्ण मानवजातिलाई कसरी आपूर्ति र भरण-पोषण प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्‍यौँ। यो एउटा पक्ष हो। यसपछि, हामी अर्को पक्षको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं जुन परमेश्‍वरले सबै कुरामाथि नियन्त्रण कायम गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुने तरिका हो। म परमेश्‍वरले यावत् थोकको सृष्टि गर्नुभएपछि तिनीहरूको बीचका सम्बन्धहरूलाई कसरी सन्तुलन गर्नुभयो भन्नेबारेमा कुरा गर्दैछु। यो पनि तिमीहरूको लागि अलि ठूलो विषय हो। यावत् थोकबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नु—के यो मानिसहरूले हासिल गर्न सक्ने कुरा हो त? होइन, मानिसहरूले यस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। मानिसहरूले विनाश गर्न मात्र सक्छन्। तिनीहरूले यावत् थोकबीचका सम्बन्धहरूलाई सन्तुलन गर्न सक्दैनन्; तिनीहरूले ती कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् र त्यस्तो ठूलो अख्तियार र शक्ति मानवजातिको पकडभन्दा बाहिर छ। परमेश्‍वर स्‍वयम्‌सँग मात्र यस प्रकारको कार्य गर्न सक्ने शक्ति छ। तर यस्तो कार्य गर्नुपछाडि परमेश्‍वरको के उद्देश्य छ—यो केको लागि हो? यो पनि मानवजातिको जीवन-अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ। परमेश्‍वरले गर्न चाहनुहुने हरेक कुरा जरुरी छन्—उहाँले गर्न पनि सक्ने वा नगर्न पनि सक्ने कुनै कुरा नै छैन। उहाँले मानवजातिको जीवन-अस्तित्वलाई सुरक्षा गर्न र मानिसहरूलाई बाँच्नको लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गर्न, उहाँले केही अपरिहार्य, अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ।
“परमेश्‍वरले यावत् थोकलाई सन्तुलन गर्नुहुन्छ” भन्ने पदावलीको शाब्दिक अर्थबाट यो एकदमै फराकिलो विषय हो जस्तो देखिन्छ। सबभन्दा पहिले, यसले मानिसहरूलाई “यावत् थोकलाई सन्तुलन गर्ने” कुराले यावत् थोकमाथि परमेश्‍वरको आधिपत्यलाई जनाउँछ भन्ने अवधारणा प्रदान गर्छ। “सन्तुलन गर्नु” भन्नुको अर्थ के हो? सबभन्दा पहिले, “सन्तुलन गर्नु” ले कुनै कुरालाई सन्तुलनबाहिर जान नदिनु भन्ने जनाउँछ। यो भनेको चीजबीजहरूको तौल लिन तराजु प्रयोग गर्नु जस्तै हो। तराजुलाई सन्तुलन गर्न दुवैतिर राखिने तौल उही हुनुपर्छ। परमेश्‍वरले विविध प्रकारका कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो: आफ्नै स्थानमा स्थिर गरिएका कुराहरू, चहलपहल गर्ने कुराहरू, जीवित रहेका कुराहरू, सास फेर्ने कुराहरू, र साथसाथै सास नफेर्ने कुराहरू। के यी सबै कुराहरूले एक-अर्कालाई सुदृढ पनि पार्ने र एक-अर्कालाई नियन्त्रण पनि गर्ने गरी एक-अर्काबीचमा अन्तर्निर्भरता वा परस्पर सम्बद्धताको सम्बन्ध हासिल गर्न सजिलो छ त? यी सबै कुराहरूभित्र अवश्य पनि सिद्धान्तहरू छन्, तर तिनीहरू निकै जटिल छन्, छैनन् त? परमेश्‍वरको लागि यो मुस्किल छैन, तर मानिसहरूको लागि यो अध्ययन गर्नुपर्ने अत्यन्तै जटिल विषय हो। “सन्तुलन गर्नु” एकदमै सरल शब्द हो। तथापि, यदि मानिसहरूले यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्‍यो भने, र यदि मानिसहरूले आफैले सन्तुलन सृजना गर्नुपर्ने भयो भने, सबै विधाका प्राज्ञिक वर्ग अर्थात् मानव-जीवविज्ञानवेत्ता खगोलशास्त्री, भौतिकविज्ञानवेत्ता, रसायनशास्त्री र इतिहासशास्त्रीहरूसमेतले काम गरे भने पनि यस्तो शोध-अध्ययनको अन्तिम नतिजा के नै हुन्थ्यो र? यसको नतिजा केही पनि हुँदैनथियो। किनभने परमेश्‍वरले गर्नुभएको यावत् थोकको सृष्टि अत्यन्तै अविश्‍वसनीय छ र मानवजातिले यसका रहस्यहरूलाई कहिल्यै पनि खोतल्न सक्नेछैनन्। जब परमेश्‍वरले यावत् थोक सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूको बीचमा सिद्धान्त स्थापित गर्नुभयो, परस्पर नियन्त्रण, परिपूरकता र भरणपोषणको लागि जीवन-अस्तित्वका विभिन्न तौरतरिकाहरू स्थापित गर्नुभयो। यी विभिन्न तौरतरिकाहरू एकदमै जटिल छन् र तिनीहरू निश्चय पनि सरल वा एकदिशात्मक छैनन्। मानिसहरूले आफ्नो मनमस्तिष्क, आफूले हासिल गरेका ज्ञान र आफूले अवलोकन गरेका घटनाहरूलाई यावत् थोकमाथि परमेश्‍वरको नियन्त्रण हुनुपछाडिका सिद्धान्तहरूलाई पुष्टि वा अध्ययन गर्नको लागि प्रयोग गर्दा, यी कुराहरू पत्ता लगाउन असाध्यै मुस्किल छन्, र कुनै पनि परिणाम हासिल गर्न पनि अत्यन्तै मुस्किल छ। मानिसहरूले कुनै पनि परिणाम हासिल गर्न एकदमै गाह्रो छ; परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएका यावत् थोकमाथि शासन गर्न मानव सोचविचार र ज्ञानमा निर्भर रहेर मानिसहरूले तिनीहरूलाई सन्तुलन गर्न अत्यन्तै मुस्किल छ। किनभने यदि मानिसहरूले सबै कुराहरूको जीवन-अस्तित्वका सिद्धान्तहरू जान्दैनन् भने, तिनीहरूले यस प्रकारको सन्तुलनलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने जान्दैनन्। त्यसकारण, यदि मानिसहरूले यावत् थोकहरूलाई व्यवस्थापन र शासन गर्नुपर्‍यो भने, तिनीहरूले यो सन्तुलनलाई नाश गर्ने सम्भावना एकदमै अधिक हुन्थ्यो। सन्तुलन नाश हुनेबित्तिकै, मानवजातिको जीवन-अस्तित्वको वातावरण नाश हुन्थ्यो, र जब त्यस्तो हुन्थ्यो, तब यसपछि लगत्तै मानवजातिको जीवन-अस्तित्वको संकष्ट आउँथ्यो। यसले विपत्ति ल्याउँथ्यो। यदि मानवजाति विपत्तिमाझ जिइरहेको छ भने, तिनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्थ्यो होला? यसको परिणाम लेखाजोखा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, र निश्चितताका साथ अनुमान गर्न असम्भव हुन्थ्यो।
त्यसो भए, परमेश्‍वरले यावत् थोकहरूबीचको सम्बन्धहरूलाई कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ त? पहिलो, संसारमा यस्ता केही ठाउँहरू छन् जुन वर्षैभरि बरफ र हिउँले ढाकिएका हुन्छन्, जबकि अन्य ठाउँहरूमा चार वटै ऋतु वसन्तजस्ता हुन्छन् र शिशिर याम कहिल्यै पनि आउँदैन र यस्ता ठाउँहरूमा तिमीहरूले कहिल्यै पनि बरफले कतै-कतै ढाकेको वा हिउँ फुसफुसाएको देख्नेछैनौं। यहाँ, हामी बृहत् जलवायुको बारेमा कुराकानी गर्दैछौं र यो उदाहरण परमेश्‍वरले यावत् थोकबीचको सम्बन्धहरूमा सन्तुलन ल्याउनुहुने धेरै तरिकाहरूमध्येको एक हो। दोस्रो तरिका यस्तो छ: एकथरि पहाडका श्रृंखलाहरू हरियालीमा ढाकिएको छ, भुईँभरि सबै प्रकारका बोटबिरुवाहरू कार्पेट बिछ्याइएजस्तै गरी रहेका छन्, जङ्गलको क्षेत्र यति बाक्ला छन् कि जङ्गलबाट हिँड्दाखेरि माथि घाम नै देख्न सकिन्न। तर अर्कोथरि पहाडका श्रृंखलाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ घाँसको एउटा पात पनि उम्रेको हुँदैन, केवल उजाड, अस्तव्यस्त पहाडको एकपछि अर्को पत्रहरू मात्र हुन्छन्। बाहिरी रूपमा, दुवै प्रकारका पहाडहरू आधारभूत रूपमा धूलो पदार्थको ठूलो थुप्रो लागेर पहाड बनेका हुन् तर एउटाचाहिँ बाक्लो जङ्गलले ढाकिएको हुन्छ भने अर्कोचाहिँ वनवुट्यानविहीन, घाँसको एउटा पात पनि नभएको हुन्छ। परमेश्‍वरले यावत् थोकबीचको सम्बन्धहरूलाई सन्तुलन गर्नुहुने दोस्रो तरिका यही हो। तेस्रो तरिका यस्तो छ: एकातिर हेर्दा तिमीहरूले अन्तहीन घाँसे मैदान, छालजस्तै तरङ्गित हुने हरियाली देख्न सक्छौ। अर्कोतिर हेर्दा भने तिमीहरूले आँखाले देखेसम्‍म टाढासम्मै मरुभूमि, उजाड ठाउँ, हावाले बालुवा उडाउँदा आउने सुइँय्यँ-सुइँय्यँ आवाजमाझ एउटा पनि जीवित कुरो नभएको, अनि पानी त थोपै नभएको देख्न सक्छौ। चौथो तरिका यस्तो छ: एकातिर हेर्दा सब थोक सागर, पानीको त्यो विशाल आयाममुनि डुबेको देखिन्छ भने अर्कोतिर हेर्दा तिमीहरूले ताजा फोहराको एक थोपा पानी भेट्न पनि ज्यान दिनुपर्छ। पाचौं तरीका यस्तो छ: यतातिरको भूमिमा पानी परेको परेकै गर्छ र जलवायु एकदमै कुहिरो लाग्ने र आर्द्रतापूर्ण हुन्छ जबकि अर्कोतिरको भूमिमा आकाशमाथि एकदमै कडा घाम छ र पानीको एक थोपा पर्नु भनेको एकदमै दुर्लभ घटना हुन्छ। छैठौं तरिका यस्तो छ: एउटा ठाउँमा पठार छ जहाँ हावा एकदमै पातलो छ र त्यहाँ मानिसलाई सास फेर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ जबकि अर्को ठाउँमा दलदले र होचो भूमि छ जसले बसाइँ सर्दै हिँड्ने विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूको बासस्थानको काम गर्छ। यिनीहरू विभिन्न प्रकारका जलवायुहरू हुन् वा यिनीहरू विभिन्न भौगोलिक वातावरणहरूसँग मेल खाने जलवायु वा वातावरणहरू हुन्। भन्नुको अर्थ, परमेश्‍वरले मानवजातिको लागि जीवन-अस्तित्वको आधारभूत वातावरणलाई बृहत् वातावरणको हिसाबमा सन्तुलन गर्नुहुन्छ, हावापानीदेखि भौगोलिक वातावरणसम्म र माटोका विभिन्न तत्वहरूदेखि पानीका स्रोतहरूको संख्यासम्मका कुराहरू सबै नै मानिसहरू बाँच्ने हावा, तापक्रम र आर्द्रतामा सन्तुलन ल्याउनको लागि सन्तुलन गर्नुहुन्छ। यी बिलकुलै फरक-फरक भौगोलिक वातावरणहरूको कारणले गर्दा नै मानिसहरूले स्थिर हावा प्राप्त गर्छन्, र विभिन्न ऋतुहरूको तापक्रम र आर्द्रता स्थिर रहन्छ। यसले मानिसहरूलाई तिनीहरू सधैँ जीवन-अस्तित्वको जुन वातावरणमा जिउँदै आएका थिए सोही प्रकारको वातावरणमा निरन्तर जिउन सक्षम तुल्याउँछ। सर्वप्रथम, बृहत् वातावरणलाई सन्तुलित गर्नुपर्छ। विभिन्न भौगोलिक स्थानहरू, बनौटहरूका साथसाथै विभिन्न हावापानीहरूबीचका परिवर्तनहरूको प्रयोग गरी यस्तो गरिन्छ जसले तिनीहरूलाई परमेश्‍वरले चाहनुभएको र मानवजातिलाई चाहिने सन्तुलन मिलाउनको लागि एक-अर्कालाई सीमित र नियन्त्रण गर्न दिन्छ। बृहत् वातावरणको दृष्टिकोणबाट बोल्दाको कुरो यही हो।
अब हामी अझै मिहिन विवरणहरू जस्तै वनवुट्यानको बारेमा कुरा गर्नेछौ। तिनीहरूको सन्तुलन कसरी हासिल गरिन्छ त? भन्नुको अर्थ, कसरी वनवुट्यानलाई जीवन-अस्तित्वको सन्तुलित वातावरणभित्र निरन्तर बाँच्न सक्षम तुल्याइन्छ त? यसको जबाफ हो: तिनीहरूको जीवन-अस्तित्वको वातावरण सुरक्षित गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरूको आयु, वृद्धि दर, र प्रजनन दरहरूको व्यवस्थापन गरेर। उदाहरणको लागि सानो घाँसलाई लिऊँ—वसन्तमा मुना, ग्रीष्ममा फूल, शरदमा फल हुन्छन्। फल भुईँमा खस्छ। अर्को साल, फलको बीउ टुसाउँछ र उही नियम-व्यवस्थाअनुसार निरन्तर बढ्दै जान्छ। घाँसको आयु एकदमै छोटो हुन्छ; हरेक बीउहरू भुईँमा खस्छन्, जरा र टुसा पलाउँछन्, फूल फुल्छन्, फल फल्छन्, र सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन ऋतुहरूपश्चात अर्थात् वसन्त, ग्रीष्म र शरदपश्चात मात्र पूरा हुन्छन्। सबै प्रकारका रुखहरूको पनि आफ्नै आयु र टुसाउने र फल लाग्ने विभिन्न अवधिहरू हुन्छन्। केही रुखहरू ३० देखि ५० वर्षपछि मर्छन्—यो तिनीहरूको आयु हो। तर तिनीहरूको फल भुईँमा खस्छन् जसबाट जरा र टुसा पलाउँछ, फूल फुल्छ र फल लाग्छ अनि अर्को ३० देखि ५० वर्षसम्म बाँच्छ। तिनीहरूको पुनरावृति दर यही हो। कुनै बूढो रुख मर्छ र नयाँ रुख उम्रन्छ; यसकारण, तैँले जङ्गलमा सधैँ रुखहरू उम्रिरहेको देख्छस्। तर तिनीहरूको पनि आफ्नै सामान्य चक्र हुन्छ र तिनीहरूको जन्म र मृत्यु हुन्छ। केही रूखहरू हजार वर्षभन्दा बढी बाँच्छन्, र केही त तीन हजार वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्छन्। चाहे यो जुनसुकै प्रकारको वनस्पति नै किन नहोस् वा यसको जतिसुकै लामो आयु नै किन नहोस्, सामान्य रूपमा भन्दा परमेश्‍वरले यो कति वर्ष बाँच्छ भन्ने तथ्य, यसको प्रजनन क्षमता, यसको प्रजननको गति र आवृति, र यसले उत्पादन गर्ने सन्तान संख्याको आधारमा यसको सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। यसले घाँसदेखि रुखसम्मका वनस्पतिहरूलाई सन्तुलित पर्यावरणीय वातावरणभित्र बाँच्न र वृद्धि हुन सक्षम तुल्याउँछ। त्यसकारण, जब तैँले पृथ्वीको जङ्गललाई हेर्छस्, यसभित्र उम्रने सबै थोक, घाँस र रुखहरू सबैले निरन्तर आफ्नै नियम-व्यवस्थाहरूअनुसार प्रजनन क्रिया गरिरहेका र वृद्धि भइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई अतिरिक्त परिश्रम वा मानवजातिबाट कुनै मद्दत आवश्यक पर्दैन। तिनीहरूसँग आफ्नै प्रकारको सन्तुलन भएकोले मात्र तिनीहरूले तिनीहरूको आफ्नो जीवन-अस्तित्वको वातावरणलाई कायम गरी राख्न सकेका छन्। तिनीहरूसँग जीवन-अस्तित्वको उपयुक्त वातावरण भएकोले मात्र संसारका जङ्गलहरू र घाँसे मैदानहरू पृथ्वीमा निरन्तर बाँचिरहन सक्षम ‍छन्। तिनीहरूको अस्तित्वले मानिसहरूको पुस्तौंपुस्ताका साथै जङ्गल र घाँसे मैदानहरूमा बासस्थान हुने चराचुरुङ्गीहरू, जन्तुहरू, कीराफट्याङ्ग्राहरू र सबै प्रकारका सूक्ष्मजीवहरूजस्ता हरप्रकारका जीवित प्राणीहरूलाई पोषण प्रदान गर्छन्।
परमेश्‍वरले सबै प्रकारका जनावरहरूबीचको सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। उहाँले कसरी यो सन्तुलन नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त? यो कुरा वनस्पतिहरूको जस्तै छ—उहाँले तिनीहरूको सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको संख्यालाई तिनीहरूको प्रजनन क्षमता, तिनीहरूको प्रजननको परिमाण र आवृति, र जनावरहरूको संसारमा तिनीहरूले खेल्ने भूमिकाको आधारमा निर्धारण गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, सिंहले वनघोडालाई खान्छ, त्यसकारण यदि सिंहहरूको संख्या वनघोडाको भन्दा धेरै भयो भने, वनघोडाहरूको नियति के हुन्थ्यो होला? अनि यदि वनघोडाहरूले सिंहहरूको भन्दा एकदमै थोरै मात्र सन्तानोत्पादन गर्थे भने, तिनीहरूको नियति के हुन्थ्यो? तिनीहरू लोप हुन्थे। त्यसकारण, वनघोडाहरूको संख्या सिंहहरूको भन्दा अत्यन्तै धेरै हुनुपर्छ। यस्तो हुनुपर्छ किनभने वनघोडाहरू आफ्नो लागि मात्र अस्तित्वमा रहँदैनन्, बरु तिनीहरू त सिंहको लागि समेत अस्तित्वमा रहन्छन्। तिमीहरूले यसरी पनि भन्न सक्छौ: हरेक वनघोडा वनघोडाहरूको समग्रताको एक हिस्सा हो, तर यो सिंहहरूको मुखको भोजन पनि हो। सिंहहरूको प्रजननको गति वनघोडाहरूको भन्दा बढी कहिल्यै पनि हुन सक्दैन ताकि तिनीहरूको संख्या वनघोडाहरूको भन्दा धेरै नहोस्। यसप्रकार मात्र सिंहहरूको खानाको स्रोतको प्रत्याभूति हुन्छ। अनि यसकारण, सिंहहरू वनघोडाहरूको प्राकृतिक शत्रु भए पनि, मानिसहरूले बारम्बार यी दुवै प्रजातिहरूलाई एउटै क्षेत्रमा आराम गरिराखेको देख्छन्। वनघोडाहरू तिनीहरूलाई सिंहले शिकार गरी खाए पनि लोप हुँदैनन् वा तिनीहरूको संख्या घट्दैन अनि सिंहहरूको “राजा” को हैसियत भएकै कारणले तिनीहरूको संख्या बढ्छ भन्‍ने छैन। यो सन्तुलन परमेश्‍वरले धेरैअघि स्थापित गर्नुभएको कुरा हो। अर्थात्, परमेश्‍वरले सबै जनावरबीचमा सन्तुलनको नियम-व्यवस्था स्थापित गर्नुभयो ताकि तिनीहरूले यस प्रकारको सन्तुलन प्राप्त गर्न सकून्, र मानिसहरूले प्रायः देख्ने कुरा यही हो। के वनघोडाहरूको प्राकृतिक शत्रु सिंह मात्रै हो त? होइन, गोहीहरूले पनि वनघोडाहरूलाई खान्छन्। वनघोडाहरू त एकदमै लाचार जनावरजस्तै देखिन्छ। तिनीहरूसँग सिंहको जस्तो भयानकता छैन अनि जब तिनीहरूले यो डरलाग्दो शत्रु सिंहको सामना गर्छन्, तब तिनीहरूले गर्न सक्ने सबै कुरा भनेको भाग्नु मात्र हो। तिनीहरू प्रतिरोध गर्नको लागि पनि शक्तिहीन छन्। जब तिनीहरूले सिंहलाई दौडेर जित्न सक्दैनन्, तिनीहरूले आफूलाई यसको खाना हुन दिन मात्र सक्छन्। यो कुरालाई जनावरको संसारमा बारम्बार देख्न सकिन्छ। जब यस प्रकारको कुरा तिमीहरूले देख्छौ, तब तिमीहरूमा के-कस्ता अनुभूति र विचारहरू आउँछन्? के तिमीहरू वनघोडाप्रति दुःखी महसुस गर्छौ? के तिमीहरू सिंहलाई घृणा गर्छौ? वनघोडाहरू कति सुन्दर देखिन्छन्! तर सिंहहरू भने सधैँ तिनीहरूलाई लोभी आँखाले हेरिरहेका हुन्छन्। अनि वनघोडाहरू भने मूर्खता गर्दै टाढा भागेर जाँदैनन्। तिनीहरूले सिंहलाई चिसो छहारी मुनि तिनीहरूलाई पर्खेर बसेको देख्छन्। कुनै पनि क्षण यसले आएर तिनीहरूलाई खान सक्छ। तिनीहरूलाई आफ्नो हृदयमा यो कुरा थाहा हुन्छ, तर अझै पनि तिनीहरूले उक्त स्थान छोड्दैनन्। यो अचम्मलाग्दो कुरा हो, यस्तो अचम्मको कुरो जसले परमेश्‍वरको पूर्वनिर्धारित गन्तव्य र उहाँको शासनलाई प्रकट गर्छ। तैँले वनघोडाप्रति दुःखित महसुस गर्छस् तर तैँले यसलाई बचाउन सक्दैनस्, अनि तैँले सिंहलाई घृणा गर्छस् तर तैँले यसलाई नाश गर्न सक्दैनस्। वनघोडा परमेश्‍वरले सिंहको लागि तयार गर्नुभएको खाना हो, तर सिंहहरूले जति धेरै खाए पनि वनघोडाहरू लोप भएर जाँदैनन्। सिंहले जन्माउने बच्चाहरूको संख्या एकदमै थोरै हुन्छ, र तिनीहरूले एकदमै ढिलो गरी बच्चा जन्माउँछन्, त्यसकारण तिनीहरूले जति धेरै वनघोडा खाए पनि, तिनीहरूको संख्याले वनघोडाहरूको संख्यालाई कहिल्यै पनि उछिन्नेछैन। यसमा सन्तुलन छ।
यस प्रकारको सन्तुलन कायम राख्नुपछाडि परमेश्‍वरको लक्ष्य के छ त? यसको सम्बन्ध मानिसहरूको जीवन-अस्तित्वको वातावरणका साथै मानवजातिको जीवन-अस्तित्वसँग छ। यदि वनघोडा वा सिंहको त्यस्तै प्रकारको शिकारले—हरिण वा अन्य जनावरहरूले—एकदमै सुस्त गतिमा प्रजनन गरे र सिंहको संख्या अत्याधिक रूपमा बढ्यो भने, मानवजातिले कस्तो प्रकारको खतराको सामना गर्नुपर्थ्यो? सिंहले आफ्नो शिकारलाई खानु सामान्य घटना हो तर सिंहले व्यक्तिलाई खानु दुःखद कुरा हो। यो दुःखद कुरा परमेश्‍वरले पूर्वनिर्धारति गर्नुभएको कुरा होइन, यो उहाँको शासनअन्तर्गत हुने कुरा होइन, यो उहाँले मानवजातिमा ल्याउनुभएको कुरा हो भन्‍ने त परै जाओस्। बरु यो त मानिसहरूले आफैले आफूमाथि ल्याउने कुरा हो। यसर्थ, परमेश्‍वरले देख्नुभएअनुसार, सबै थोकबीचमा हुने सन्तुलन मानवजातिको जीवन-अस्तित्वको लागि अत्यावश्यक छ। चाहे त्यो वनस्पति होस् वा जनावर होस, कुनैले पनि आफ्नो उचित सन्तुलन गुमाउनु हुँदैन। वनस्पति, पहाड र तालहरू—परमेश्‍वरले मानवजातिको जीवन-अस्तित्वको लगि नियमित पर्यावरणीय वातावरण तयार गर्नुभएको छ। मानिसहरूले यस प्रकारको नियमित पर्यावरणीय वातावरण अर्थात सन्तुलित वातावरण पाउँदा मात्र तिनीहरूको जीवन-अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ। यदि रुख वा घाँसहरूको प्रजनन कमजोर भएको भए वा तिनीहरूको प्रजननको गति अति सुस्त भएको भए, के माटोले आर्द्रता गुमाउँदैनथ्यो र? यदि माटोले आर्द्रता गुमाएको भए, के यो अझै पनि स्वस्थ हुन्थ्यो र? यदि माटोले वनवुट्यान र आर्द्रता गुमायो भने, यसमा चाँडो क्षयीकरण हुन्थ्यो र यसको सट्टामा बालुवा निर्मित हुन्थ्यो। जब माटो बिग्रन्थ्यो, तब मानवजातिको जीवन-अस्तित्वको वातावरण पनि विनाश हुन्थ्यो। उक्त विनाशसँगै थुप्रै विपत्तिहरू आउँथे। यस प्रकारको सन्तुलनविना, यस प्रकारको पर्यावरणीय वातावरणविना, यावत् थोकबीच सन्तुलन नभएर मानिसहरूलाई बारम्बार विपत्तिहरू आइपर्थ्यो। उदाहरणको लागि, जब वातावरणीय असन्तुलनले भ्यागुताहरूको पर्यावरणीय वातावरणको विनाश हुन्छ, तब तिनीहरू सबै एकसाथ जम्मा हुन्छन्, तिनीहरूको संख्या अत्याधिक रूपमा बढ्छ र तिनीहरू ठूलो संख्यामा शहरी बाटोमा उफ्रिहिँडेको समेत मानिसहरूले देख्छन्। यदि भ्यागुताहरूको ठूलो संख्याले मानिसहरूको वातावरणलाई ढाक्छन्, भने त्यसलाई के भनिन्थ्यो? विपत्ति। किन यसलाई विपत्ति भनिन्थ्यो? मानवजातिका लागि फाइदाजनक यी साना प्राणीहरू तिनीहरू जुन ठाउँमा रहन उपयुक्त छ त्यही ठाउँमा रहे भने मात्र मानिसहरूको लागि उपयोगी हुन्छन्; तिनीहरूले मानिसहरूको जीवन-अस्तित्वको वातावरणको सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्। तर यदि तिनीहरू विपत्ति बन्छन् भने तिनीहरूले मानिसहरूको जीवनको सुव्यवस्थितपनमा असर पुर्‍याउनेछन्। भ्यागुताहरूले आफ्नो शरीरमा ल्याउने सबै कुरा र तत्वहरूले मानिसहरूको जीवनको गुणस्तरमा असर पुर्‍याउन सक्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूको शारीरिक अङ्गहरूमा आक्रमण हुने पनि गराउँछन्—यो विपत्तिहरूको एक प्रकार हो। मानिसहरूले बारम्बार भोगेको अर्को प्रकारको विपत्ति अनगिन्ती सलहहरूको आगमन हो। के यो विपत्ति होइन र? हो, यो एकदमै डरलाग्दो विपत्ति हो। मानिसहरू जति नै सक्षम भए पनि—मानिसहरूले हवाइजहाज, तोप र एटम बमहरू बनाउन सक्छन्—तर जब सलहले आक्रमण गर्छ, मानवजातिसँग यसको के समाधान छ र? के तिनीहरूले तिनमा तोप प्रयोग गर्न सक्छन् र? के तिनीहरूले तिनलाई मेशिन गनले हान्न सक्छन् र? अहँ, तिनीहरूले सक्दैनन्। अनि तिनीहरूले तिनलाई भगाउनको लागि कीटनाशक औषधि छर्कन सक्छन् र? त्यो पनि सजिलो काम होइन। यी साना सलहहरू के गर्न आउँछन् त? तिनीहरूले निश्‍चित रूपमा बाली र अन्न खान्छन्। जहाँ-जहाँ सलहहरू जान्छन्, त्यहाँ-त्यहाँ बालीहरूको पूर्ण विनाश हुन्छ। सलहहरूको आक्रमणको समयमा, किसानहरूले पूरै एक वर्षसम्म भर पर्न सक्ने खानालाई सलहहरूले आँखा झिमिक गर्दा पूरै खाइसक्छन्। मानिसहरूको लागि, सलहहरूको आगमन टाउको दुखाइ मात्र होइन—यो त विपत्ति हो। त्यसो भए, हामीलाई थाहा भयो कि अनगिन्ती सलहहरू देखिनु एक प्रकारको विपत्ति हो, तर मुसाहरू के हुन् त? यदि मुसा खाने शिकारी चराहरू छैनन् भने, तिनीहरूको संख्या एकदमै छिटो बढ्छ, तिमीहरूले कल्पना गर्न सक्ने भन्दा पनि छिटो बढ्छ। अनि यदि मुसाहरू अनियन्त्रित रूपमा फैलिए भने, के मानिसहरूले राम्रो जीवन जिउन सक्छन्? मानिसहरूले कस्तो प्रकारको अवस्थाको सामना गर्नुपर्थ्यो? (महामारी।) तर के तिमीहरू महामारी एक मात्रै परिणाम हुनेथियो भनी सोच्छौ? मुसाहरूले जे पनि चपाउनेछन्, र तिनीहरूले काठ पनि टोक्नेछन्। यदि घरमा दुई वटा मात्र मुसा छन् भने घरमा बस्ने हरेकलाई हैरानी हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले तेल चोरी खान्छन् र कहिलेकाहीँ तिनीहरूले रोटी र अन्न खान्छन्। अनि तिनीहरूले नखाने कुराहरूलाई चपाएर भद्रगोल पार्छन्। तिनीहरूले कपडा, जुत्ता, फर्निचर चपाउँछन्—तिनीहरूले हरेक कुरा चपाउँछन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरू आलमारीमा चढ्छन्—के मुसा हिँडेपछि ती थालबटुकाहरू अझै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र? तिनीहरूलाई निसंक्रमण गरे पनि तैँले अझै असहज महसुस गर्छस्, त्यसैले तैँले तिनीहरूलाई बाहिर फालिदिन्छस्। मुसाले मानिसहरूलाई दिने हैरानी यिनै हुन्। मुसाहरू साना प्राणीहरू भए पनि, मानिसहरूसँग तिनीहरूको हल निकाल्ने तरिका नै छैन, बरु तिनीहरूले तिनको हरेक लुटपाट सहनुपर्छ। विध्वंस गर्नको लागि एक जोडी मुसा नै काफी छन्, मुसाको बथानको त कुरै नगरौं। यदि तिनीहरूको संख्या अत्याधिक रूपमा बढ्यो र तिनीहरू विपत्ति बने भने, परिणाम सोच्नै नसकिने हुन्थ्यो। कमिलाजस्ता साना प्राणीहरू पनि विपत्ति बन्छन्। यदि त्यस्तो भयो भने त, तिनीहरूले मानवजातिमा गर्ने हानि पनि बेवास्ता गर्न नसकिने हुन्थ्यो। कमिलाहरूले घरमा यति धेरै हानि गर्छन् कि ती घरहरू लड्छन्। तिनीहरूको तागतलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यदि विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूले विपत्ति ल्याए भने त, के त्यो डरलाग्दो हुँदैनथ्यो र? (हुन्थ्यो।) अर्को तरिकाले भन्दा, जनावरहरू वा जीवित प्राणीहरू, चाहे तिनीहरू जुनसुकै प्रकारका नै किन नहुन्, तिनीहरूको सन्तुलन बिग्रियो भने, तिनीहरू वृद्धि हुनेछन्, प्रजनन गर्नेछन् र असामान्य दायरा, अनियमित दायरामा बाँच्नेछन्। त्यसले मानवजातिको लागि कल्पना गर्नै नसकिने परिणामहरू ल्याउँथ्यो। त्यसले मानिसहरूको अस्तित्व र जीवनहरूमा मात्र असर पुर्‍याउँदैनथ्यो, बरु त्यसले त मानवजातिमा विपत्ति ल्याउँथ्यो र उक्त विपत्ति मानिसहरूले पूर्ण विनाश र लोप हुने नियति भोग्ने हदसम्मको हुन्थ्यो।
परमेश्‍वरले सबै थोक सृजनुभयो उहाँले तिनीहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउनको निम्ति अर्थात् पहाड-पर्वत र ताल-तलैयाको, बोट बिरुवा र सबै किसिमका जीवजन्तु, चरा-चुरुङ्गी र कीरा-फट्याङ्ग्राहरूको जीवनको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्‍नको निम्ति सबै किसिमका विधि र तरिकाहरूको प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले स्थापना गर्नुभएको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर सबै किसिमका जीवित प्राणीहरूलाई जिउन र वृद्धि हुन दिनु उहाँको लक्ष्य थियो। सृष्टिका कुनै पनि थोकहरू यी व्यवस्था बाहिर जान सक्दैनन् र व्यवस्थालाई तोड्न सकिँदैन। यस आधारभूत किसिमको वातावरणमा मात्र मानव पुस्तादेखि पुस्तासम्म सुरक्षितसाथ बाँच्‍न र वृद्धि हुन सक्छन्। यदि कुनै जीवित प्राणी परमेश्‍वरले स्थापित गर्नुभएको परिमाण वा क्षेत्रदेखि बाहिर जान्छ वा यदि यसले उहाँले तोक्‍नुभएको वृद्धि दर, प्रजनन आवृत्ति वा सङ्ख्यालाई नाघ्छ भने मानवजातिको अस्तित्वको वातावरण विनाशका विभिन्‍न हदहरूले ग्रसित हुनेछ। साथै, मानवजातिको अस्तित्व जोखिममा पर्नेछ। यदि एक किसिमको जीवित प्राणी सङ्ख्यामा अत्यन्तै धेरै छ भने यसले मानिसहरूको खाना लुट्नेछ, मानिसहरूको पानीको स्रोतहरू नष्ट गर्नेछ र तिनीहरूको मातृ-भूमिलाई बरबाद पार्नेछ। त्यसरी, मानवजातिको प्रजनन वा अस्तित्वको अवस्था तत्कालै प्रभावित हुनेछ। उदाहरणको लागि, पानी सबै थोकको लागि महत्वपूर्ण छ। यदि अत्याधिक संख्यामा मुसा, कमिला, सलह, भ्यागुता, वा अन्य कुनै प्रकारका जनावरहरू छन् भने, तिनीहरूले अझ धेरै पानी पिउँछन्। तिनीहरूले धेरै पानी पिउन थालेपछि, पिउने पानीको स्रोत भएको सीमित क्षेत्र र जलीय क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले पिउने पानी र पानीको स्रोत न्यून हुन जान्छ र तिनीहरूले पानीको अभाव भोग्छन्। यदि सबै प्रकारका जनावरहरूको संख्या बढेको कारण मानिसहरूको पिउने पानी नष्ट हुन्छ, दूषित बन्छ, वा त्यसको आपूर्ति बन्द हुन्छ भने, जीवन-अस्तित्वको त्यस प्रकारको कठोर वातावरणमा मानवजातिलाई गम्भीर चुनौती आइलाग्छ। यदि एक किसिमको वा अनेक किसिमका जीवित प्राणीहरूले तिनीहरूको उचित सङ्ख्या पार गरे भने हावा, तापक्रम, आद्रता र मानवजाति बाँच्‍ने ठाउँभित्रको हावाको संयोजन विभिन्‍न हदले विषाक्त र नष्ट हुनेछ। यी परिस्थितिहरूमा मानवहरूको अस्तित्व र नियति पनि यी पर्यावरणीय कारकहरूद्वारा उत्पन्न खतरामा पर्नेछ। यसैले, यी सन्तुलनहरू गुमे भने मानिसहरूले सास फेर्ने हावा बर्बाद हुनेछ, तिनीहरूले पिउने पानी दूषित हुनेछ र तिनीहरूको लागि आवश्यक पर्ने तापक्रमहरू पनि परिवर्तन हुनेछ र विभिन्‍न हदहरूमा प्रभावित हुनेछ। यदि त्यसो भयो भने स्वभाविक रूपमा मानवजातिको अधिनमा रहेको बाँच्‍ने वातावरणहरूमाथि ठूला प्रभाव र चुनौतिहरू आइपर्नेछन्। मानवहरूको अस्तित्वका आधारभूत वातावरणहरू नष्ट पारिएको यस्तो किसिमको परिदृष्यमा मानवजातिको नियति र सम्भावनाहरू के होलान् त? यो एकदमै गम्भीर समस्या हो! सृष्टिका हरेक थोकहरू मानवजातिको निम्ति के कारणले अस्तित्वमा छन्, उहाँले सृष्टि गर्नुभएका हरप्रकारका वस्तुहरूको के भूमिका छ, हरेक वस्तुको मानवजातिमा कस्तो किसिमको प्रभाव हुन्छ र यसले मानवजातिलाई कुन हदसम्म फाइदा दिन्छ भन्‍ने कुरा परमेश्‍वरलाई थाहा भएकोले, परमेश्‍वरको हृदयमा यो सबैको योजना भएकोले र उहाँले सृष्टि गर्नुभएका सबै थोकहरूका हरेक पक्षहरूको व्यवस्थापन उहाँले गर्नुहुने भएकोले, उहाँले गर्नुहुने हरेक कुरा मानवजातिको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छन्। यसैले अब उप्रान्त जबजब तैँले परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूको बीचमा केही पर्यावरणीय घटनाहरू देख्छस् वा परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूको बीचचमा केही प्राकृतिक नियमले काम गरेको देख्छस्, तबतब तैँले परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएको हरेक थोकको आवश्यकताको बारेमा कुनै पनि शंका गर्नेछैनस्। तैँले परमेश्‍वरको सबै थोकहरूको प्रबन्ध र मानवजातिको निम्ति उपलब्ध गराउने उहाँका विविध तरिकाहरूको बारेमा अबउप्रान्त मनमानी निर्णयहरू गर्न अनभिज्ञ शब्दहरू प्रयोग गर्नेछैनस्। न त तँ परमेश्‍वरका सृष्टिका सबै थोकहरूको निम्ति उहाँका व्यवस्थाहरूको बारेमा मनमानी निष्कर्षहरूमा नै पुग्‍ने छस्। अवस्था यस्तै हो नि, होइन र?
हामीले भर्खरै कुरा गरिरहेको यो सबै के हो त? एकै क्षण सोच त। परमेश्‍वरले गर्नुहुने हरेक काम-कुरामा उहाँको आफ्नै अभिप्राय हुन्छ। उहाँको अभिप्राय मानिसहरूको लागि बुझ्न नसकिने भए पनि, यो सधैँ जटिल र शक्तिशाली रूपमा मानवजातिको जीवन-अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा अपरिहार्य छ। किनभने परमेश्‍वरले कहिल्यै पनि व्यर्थको काम गर्नुभएको छैन। उहाँले गर्नुहुने हरेक काम-कुरापछाडिका सिद्धान्तहरूमा उहाँको योजना र उहाँको बुद्धि मिसिएर आएका हुन्छन्। उक्त योजनापछाडिका लक्ष्य र अभिप्राय मानवजातिको संरक्षण गर्नको लागि, मानवजातिलाई विपत्ति, अन्य जीवित प्राणीहरूले गर्ने विध्वंस र परमेश्‍वरको सृष्टिका कुनै पनि कुराले मानिसहरूलाई गर्ने जुनसुकै प्रकारको हानि टार्न मद्दत गर्नको लागि हुन्छन्। त्यसो भए, हामीले यो विषयभित्र देखेका परमेश्‍वरका कार्यहरू परमेश्‍वरको अर्को तरिका हो जसमार्फत उहाँले मानवजातिलाई भरणपोषण गर्नुहुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त? के हामीले यी कार्यहरूमार्फत परमेश्‍वरले मानवाजतिलाई खुवाउँदै र गोठाला गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त? (सकिन्छ।) के यो विषय र हाम्रो संगतिको “सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ” भन्‍ने मूल भावको बीचमा दह्रिलो सम्बन्ध छ? (छ)। यसमा एकदमै दह्रिलो सम्बन्ध छ र यो विषय त्यसको एउटा पक्ष हो। यी विषयहरूको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि, मानिसहरूसित परमेश्‍वर, परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ र उहाँका कार्यहरूको बारेमा केही अस्पष्ट कल्पना मात्रै थिए—तिनीहरूसँग साँचो बुझाइको अभाव थियो। तथापि, जब मानिसहरूलाई उहाँका कार्यहरू र उहाँले गर्नुभएका काम-कुराहरूको बारेमा बताइन्छ, तिनीहरूले परमेश्‍वरले जे गर्नुहुन्छ सोपछाडिका सिद्धान्तहरूलाई बुझ्न र बोध गर्न सक्छन्, र तिनीहरूले ती कुराहरूको बुझाइ हासिल गरी तिनलाई प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँसम्म पुग्छन्—अवस्था यस्तै हो नि, होइन र? परमेश्‍वरले यावत् थोकको सृष्टि गर्ने र तिनीहरूमाथि शासन गर्नेजस्ता कुनै काम-कुराहरू गर्दा उहाँको हृदयमा हरप्रकारका जटिल परिकल्पना, सिद्धान्त र नियमहरू हुने भए तापनि, के तिमीहरूले सङ्गतिको दौरान तिनीहरूको एक भागको बारेमा सिकेर मात्र पनि तिनीहरू परमेश्‍वरका कार्यहरू हुन् र तिनीहरू हुन सक्ने हदसम्म वास्तविक छन् भनी आफ्नो हृदयमा बुझाइ हासिल गर्न सम्भव छैन र? (छ।) त्यसो भए, परमेश्‍वरबारेको तिमीहरूको वर्तमान ज्ञान पहिलेको भन्दा कति फरक छ त? यो यसको सारमा फरक छ। पहिले, तिमीहरूको बुझाइ औधी खोक्रो, औधी अस्पष्ट थियो, तर अहिले तिमीहरूको बुझाइमा परमेश्‍वरको कार्यहरूसँग मेल खाने, परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्योसँग मेल खाने एकदमै धेरै ठोस प्रमाण छन्। त्यसकारण, मैले भनेका सबै कुरा परमेश्‍वरबारेको तिमीहरूको बुझाइको लागि सानदार शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्।
अघिल्लो: सबै थोकप्रतिको परमेश्‍वरका नियमहरू अपरिहार्य रूपमा नै मानवजातिको अस्तित्वसँग जोडिएका छन्
अर्को: परमेश्‍वरले विभिन्‍न भौगोलिक वातावरणको लागि सीमाहरू तय गर्नुहुन्छ
यी कुराहरूको बारेमा केही बताइसकेपछि, के तिमीहरूले अहिले हामीले भर्खरै छलफल गरेको मुख्य विषयको बारेमा केही कुरा सिक्यौ? के तिमीहरूले यो कुरा...
परमेश्‍वरले सबै थोक प्रदान गर्न र मानवजातिको अस्तित्वलाई कायम राख्‍न आफ्‍नो सर्वशक्तिमान् र बुद्धिमानी मार्गको प्रयोग गर्नुहुन्छ
हामीले भर्खरै कुन-कुन विषयहरूमा छलफल गर्‍यौं? हामीले मानिसले बसोबास गर्ने वातावरण र परमेश्‍वरले त्यो वातावरणको लागि गर्नुभएको कुरा र उहाँले...
परमेश्‍वरले मानवजातिको जीवनको निम्ति सृष्टि गर्नुहुने आधारभूत वातावरण: ज्योति
चौथो कुरा मानिसहरूका आँखासँग सम्बन्धित छ: ज्योति। यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जब तैँले चम्किलो ज्योति देख्छस्, र त्यसको चमक निश्‍चित...